Axmed Buulle Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Axmed Buulle Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
Rag hubeysan waxey qeybo ka mid ah degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho ku dileen sarkaal ka tirsan dowlada Ridada dilkaasi oo faahfaahin dheeraad ah laga helayo.
Dilka sarkaalkan waxa uu sigaar ah kaga dhacay xaafada Burdheere ee degmada Waaberi,waxeyna ragga hubeysan sarkaalkan ka toogteen qeybaha sare ee jirka taasi oo sababtay in sarkaalka isla goobta ku dhinta.
Sarkaalkan lagu dilay degmada Waabere waxaa lagu magacaabi jiray Axmed Maxamuud Buulle kaasi oo ka mid ahaa saraakiisha qeybta Ashahaado la dirirka ee sida aadka ah u dhibaateeya dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Dilka sarkaalkan waxa uu kusoo aadayaa xilli sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay qaraxyo ka kala dhacay degmooyinka Shibis iyo Xamar Jajab dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen ku dhawaad Toban askari oo isugu jirta Booliska dowlada Ridada Farmaajo iyo kuwa Kufaarta Afrikaanta.